Fimamoana, fanariana basy, tsy fanarahana fitsipika… : polisy 12 efa naiditra am-ponja | NewsMada
Fimamoana, fanariana basy, tsy fanarahana fitsipika… : polisy 12 efa naiditra am-ponja
Amin’ireo antony samihafa, toy ny hoe “fimamoana, fialàna tsy nahazoana alalana amin’ny toeram-piasana, toetra fanalam-baraka ny maha polisy, tsy fanekena ny ambaratongam-pitondrana…”, ny fanariana fitaovam-panjakana (basy) no betsaka indrindra, tamin’iny taon-dasa iny. Polisy 12 efa naiditra am-ponja noho ireo antony ireo.
Nanao tatitra ny zava-bitany nandritra iny taona 2015 iny ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Nivoaka tamin’io tatitra io ny fiainana anatiny eo anivon’ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena. Miisa 12 (Inspecteur de police telo, brigadier de police dimy, sous brigadier de police telo, agent de police iray) ireo polisy nandika lalàna ka voatery tsy maintsy nandraisana fepetra hentitra (naiditra am-ponja) mifanarakana amin’izany, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ambony iray ao amin’ny polisim-pirenena. Ireo polisy nanary fitaovam-piadiana no betsaka amin’izy ireo, raha ny fanazavana hatrany. Teo koa ny fialana tsy nahazoana alalana amin’ny toeram-piasana, toetra fanalam-baraka ny maha polisy, tsy fanekena ny ambaratongam-pahefana, tsy fanarahana ny fitsipika mifehy, fimamoana. Niaiky, araka izany, ny eo anivon’ny polisim-pirenena fa misy tokoa ny fandikan-dalàna ataon’ireo polisy sasany. Nanamafy izany rahateo ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ambony iray fa rehefa ny olona eo ambany fifehezan’izy ireo no mandika lalàna na manao fihetsika tsy am-piheverana, tsy mampaninona azy ireo mihitsy ny milaza izany ampahibemaso satria tsy misy olona ambonin’ny lalàna na iza izy na iza, raha ny filazany.
Niakatra conseil de discipline…
Nivoitra tao anatin’ity tatitra ity hatrany fa nisy koa ireo polisy nihoa-pefy, tsy nanaja ny fitsipi-pifehezana mifehy ny asan’ny polisim-pirenena ka niharan’ny sazy ara-pifehezana sy famaizana mifanaraka amin’izany. Miisa 51 ny antontan-taratasy niakatra fitsarana teo anatrehan’ny conseil de discipline, ny taona 2015. Commissaire de police roa (iray naato tamin’ny asany), officier de police telo, inspecteur de police roa ary brigadier sy agent de police kosa 43 niakatra conseil de discipline.
“Rehefa vandana” dia kary, hoy ny ohapitenenana. Anisan’ny mahatonga ny mpitandro filaminana hanao asa ratsy ny fisian’ny kolikoly amin’ny fifaninanana hidirana ho mpiasam-panjakana. Tsy voasivana intsony ny olona miditra amin’izany satria hatramin’ny olon-dratsy aza tafiditra rehefa mahita lalana ambanin’ny tany. Manginy fotsiny ny firaisana tsikombakomba amin’ny jiolahy ka ireny iaraha-mahita ireny ny vokany. Misy mpitandro filaminana voarohirohy hatrany rehefa misy trangana fanafihana mitam-piadiana satria tsy ho tonga any am-pelatanan’ny jiolahy mihitsy ireny basy ireny fa tsy maintsy misy fifanarahana ambadika.